चिसो Wilds | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! चिसो Wilds | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
एक डिज्नी चलचित्र तपाईं सम्झाएर, चिसो Wilds सुन्दर बरफ-भरिएको भूमि पृष्ठभूमि मा सेट गरिएको छ. रात आकाश धेरै आकर्षक उत्तरी रोशनी संग उज्यालो छ. igt संचालित वास्तविक नगद स्लट अनलाइन कला ठूलो काम हो र विकासकर्ता खेलको ग्राफिक्स संग बाटो बाहिर गएको छ.
बर्फिलो Wilds को विकासकर्ता बारेमा
Igt सार्वजनिक कम्पनी मा गरिएका 1981 र सबै समय को सबै भन्दा प्ले स्लट मिसिन को केही सिर्जना संग जम्मा छ, जो अधिकांश पनि अब नाटक अनलाइन. यो वास्तविक नगद स्लट अनलाइन खेलको अर्को शानदार खेल आफ्नो विकास घर देखि आउन छ.
यो वास्तविक नगद स्लट अनलाइन खेल संग मानक पाँच रील आउँछ4पङ्क्तिहरू. तर, त्यहाँ कुल छन् 50 paylines यो खेल मा उपलब्ध. खेल प्रति स्पिन 50p को न्यूनतम शर्त जो अधिकतम हुन सक्छ देखि रील स्पिन गर्न अनुमति दिन्छ 1000 स्पिन गर्न. दृश्य, खेल मा सेट गरिएको छ मा हेर्न आश्चर्यजनक सुन्दर छ. को रील एक स्थिर चिसो फ्रेम बाहिर खडा. रूख भन्दा माथि हिउँ ढाकिएको छन्, ताराहरू Glistening छन् र उत्तरी रोशनी पृष्ठभूमिमा शानदार देख रहे. सबै चलचित्र जमे को सीधा बाहिर देखिन्छ. को प्रतीक विषय आधारित छन् र हिउँ चितुवा समावेश, हिउँ उल्लू, crowns, छल्ले, पेंडेंट र कम मूल्य कार्ड प्रतिमा.
यो अन्य सुविधाहरू वास्तविक नगद स्लट अनलाइन समावेश:
जंगली- प्रतिमा सबै स्ट्याक रूपमा रील मा यहाँ पनि भूमि सक्नुहुन्छ प्रस्तुत. जब तपाईं पूर्ण रील भर्नु उच्च मूल्य प्रतीक छ तपाईं अर्को स्पिन मा wilds पूरा स्ट्याकहरूको प्राप्त हुनेछ. एक पटक स्पिन पूरा, उनि आफ्नो मूल भूमिका गर्न हुनेछ.
फ्री Spins- यो सुविधा सक्रिय, तपाईं एक साथ कम्तिमा तीन ध्रुवीय भालु स्क्याटर प्रतीक प्राप्त गर्न आवश्यक छ. रूपमा स्क्याटर प्रतीक पनि देखा पर्नेछन् स्ट्याक, तपाईं अधिकतम हुन सक्छ 20 यो सुविधा सुरुवात छरिन्छ. निःशुल्क संख्या द्वारा बढ spins2हरेक जोडी प्रतिमा, लागि त3तपाईं प्राप्त छरिन्छ 10 निःशुल्क spins र लागि 20 तपाईं प्राप्त 45 मुक्त spins. तर सबै होइन, तपाईं पनि spins समयमा लैंडिंग थप wilds हुनेछ. त्यसैले, प्रस्तावको मुक्त spins को कुल संख्या एक विशाल हुन सक्छ 250.
यो वास्तविक नगद स्लट अनलाइन खेल सबै मुक्त spins र टाँसिएको wilds बारेमा जो एक नेत्रहीन आकर्षक खेल हो. खेल बारे एक प्रभावशाली RTP प्रदान गर्दछ 95.6%.